Black Mitsubishi Delica 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Than Su Shwin Service Company Limited
Pearl White Mitsubishi Delica Truck 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် SK82TM-400657) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. အသံစနစ်ပါဝင်သည်။Cassette Ra...